०.२४ प्रतिशतले घट्यो नेप्से, किन रोकिएन बजार घट्ने क्रम ?
लगानी मुख्य खबर
साउन १५, काठमाडौं । मङ्गलवार नेप्से शून्य दशमलव २४ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको दोस्रो घण्टासम्म उतारचढाव देखिएको बजार त्यसपछि अन्त्यसम्म घटेर बन्द भएको छ ।
दिनभरिको कारोबारमा नेप्से परिसूचक २ दशमलव ९१ अङ्कले घटेर १ हजार १ सय ९१ दशमलव ४७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा विकास बैङ्क, जलविद्युत् र वित्त समूहको परिसूचक बढेको छभने सात समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो ।
कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीको ३ हजार १ सय ८९ पटकको व्यापारमा ५ लाख ७८ हजार ९ सय ३३ कित्ता शेयरको रू. १६ करोड ७७ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने १० कम्पनीमा एनएमबि बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. ३ सय ६४ मा रू. ७८ लाख ७८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको रू. ७१ लाख ९८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सिद्धार्थ इक्विटी ओरियण्टेड स्किमको शेयर मूल्य ४ प्रतिशतले बढेको छभने सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीमा ५९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छभने ८० कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २४ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
बैङ्क ब्याजदरका कारण शेयर बजार बढेन लामो समयदेखि घटिरहेको शेयर बजार घट्ने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन् । बजार बढेको बेलामा रू. १ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार हुने गरेको थियो । तर अहिले रू. ५० करोड पनि शेयर कारोबार हुन मुस्किल देखिएको छ ।
बजार घटिरहेकाले लगानीकर्ताहरुको मनोवल पनि घटिरहेको छ । बैङ्कको ब्याजदर नघटेकाले शेयर बजार बढ्न नसकेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । लगानीकर्ताहरु भन्छन्, ‘बैङ्कहरुमा लगानी योग्य रकम अभाव हटिसक्दा पनि बैङकहरुले ब्याजदर घटाएका छैनन् ।’ शेयर बजारको ब्याजदरसँग उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । ब्याजदर घटेको बेलामा शेयर बजार बढ्छभने ब्याजदर बढेको बेलामा बजार घट्छ । रू. २१ खर्ब बराबरको लगानी रहेको लगानीकर्ताहरुको लगानी अहिले १४ खर्ब बराबरका आइसकेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरु निराश बनेका छन् । विगतका वर्षहरुमा चौंथो वित्तीय विवरण आउँदा बजार बढ्ने गरेको थियो । तर यसवर्ष पूँजीबजारको लागि जति सुविधा आएपनि बजार बढ्न सकेको छैन ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा असोज २९ गते [२०७७ असोज, ५]
कारोबारको दोस्रो दिन लिवर्टी इनर्जीको शेयरमूल्य १०% घट्यो, विक्रेताको अत्याधिक चाप
दोस्रो घण्टामा नेप्से स्थिर, नेपाल बैंकको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट)
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा असोज २९ गते